Ukuzola, ukufudumala nokwamkela. - I-Airbnb
Ukuzola, ukufudumala nokwamkela.
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRuth Yolanda
URuth Yolanda ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo epholileyo, ekhululekile kwaye ekhuselekileyo, ebekwe kumazantsi esixeko. Indawo ekuyo yindawo ezolileyo nekhuselekileyo. Ifumaneka kwimizuzu engama-20 ukusuka kumbindi wesixeko kunye nemizuzu nje eli-10 ukusuka kumaziko amabini aphambili okuthenga esixekweni. Indlu izimele ngokupheleleyo, inomnyango wayo kunye nepatio encinci. Inayo yonke intuthuzelo ukwenza ukuhlala kwakho kube yinto eyolisayo.
Le ndlu inamagumbi okulala amathathu, amabini kuwo axhotyiswe ngamagunjana abanzi ukuze ukwazi ukulungelelanisa izinto zakho. Inepatio yangaphakathi encinci kunye nengaphandle ukuba ufuna indawo yezilwanyana zasekhaya. Ikhitshi ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo (imicrowave, isitovu, umenzi wekofu, ifriji, izitya kunye neembiza). Igumbi lokuhlala likhululekile kwaye linomabonwakude onokufikelela kwiNetflix ukonwabela uthotho kunye neemuvi kunye nosapho. Ifulethi linegumbi lokuhlambela kunye nesiqingatha, igumbi lokuhlambela eliphambili elineshawa yanamhlanje enamanzi ashushu. Isifudumezi-manzi simi ngaphandle, singena umoya ukuze ukhuseleke ngokupheleleyo. Indlu inomatshini wokuhlamba kunye nesomisi, kunye ne-heater ehambayo enokuthi ibekwe nakweliphi na igumbi. I-Wifi iyafumaneka kwindawo yonke. Ukongeza, kukho igaraji yesithuthi esincinci. Ukuba uhamba nabantwana abancinci, unokongeza i-playpen encinci kunye ne-mattress ekhululekile kwiintsana.
Eli candelo lizolile kwaye likhuselekile, lineevenkile ezininzi zegrosari ezikufutshane kakhulu kunye nekliniki kunye nesikhululo samapolisa kumganyana ongephi. Ukongeza, iibhloko ezimbalwa ukusuka apho umntu unokufikelela eLa Tebaida Lineal Park ukuba uyathanda ukuhamba okanye umthambo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ruth Yolanda
Ndihlala kwindawo ephezulu kwaye ndiya kukuvuyela ukukunceda kuyo yonke into oyifunayo.